Magaalada Bosaso oo laga furay xarun loogu magac daray beerta nasashada iyo jirdhiska ee Maandeeq-Sawiro – Puntland Chamber of Commerce
Magaalada Bosaso oo laga furay xarun loogu magac daray beerta nasashada iyo jirdhiska ee Maandeeq-Sawiro
by mohamed Salad( Ramaas Software) —	9th May 2017
Magaalada Bosaso ee Puntland-Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay laga furay xarun cusub oo loogu magac daray beerta nasashada iyo jirdhiska ee Maandeeq.
Xarunta waxaa magaalada ka hir gelisay hay’adda wadaniga ah ee Tadamun, iyadoo dhaqaalaha ku baxay ay bixisay hay’dda SSF.
Waxa ay ka kooban tahay xarunta qeybo badan sida qeybta jirdhiska, qeybta lagu ciyaaro kubadda cagta, meel lagu akhristo buugaagta, hool loogu tala galay xafladaha, qeybta carruurta ay ku ciyaaraan, qeybta cuntada iyo cabitaanada iyo qeybo kale.
Xafladda daah-furka xarunta ayaa waxaa ka soo qeyb galay madaxda iyo shaqaalaha hay’adda Tadamun, issimo, nabadoono, maamulka gobolka Bari, xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada Bosaso, wasiirka shaqada, shaqaalaha iyo ciyaaraha Puntland, bahda waxbarashada, haween, siyaasiyiin, aqoonyahano, ganacsato, gudoomiayha rugta ganacsiga iyo wershadaha Puntland, dhalinyaro, culimo’udiin, madax ka socotay wasaaradda haweenka Puntland, iyo marti sharaf kale oo aad u badan.
Cabdiraxmaan Cabdirisaaq Cabdiraxmaan gudoomiyaha Tadamun oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in xarunta Maandeeq loogu talay is dhexgalka dhalinyarada iyo bulshada si dhalinyarada looga mashquuliyo tahriibka iyo falalka xun.
Wasiirka shaqada, shaqaalaha, dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland Cabdraxmaan Sheekh Axmed oo isan goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay soo dhaweenayaan furitaan beerta nasashada iyo jirdhiska ee Mandeeq, isagoo u mahad celiyey hay’addi magalada ka hir gelisay xarunta ee Tadamun
Ibraahim Cabdullaahi Maxamad madaxa mashaariicda Tadamun ayaa sheegay in dismaha xaruntan uu socday laba sano, isla markaana ay u mahad celinayaan shirkadda dhismaha ee Mareero oo dhistay dhismahan quruxda badan.
Author: mohamed Salad( Ramaas Software)